Apple inotangisa beta yekutanga yeXcode 9 | Ndinobva mac
Maminetsi mashoma mushure mekupedzwa kweshoko rekuratidzwa kweiyo nyowani Apple anoshanda masystem ayo anosvika mune yavo yekupedzisira vhezheni munaGunyana, Apple yakaburitsa yekutanga betas chete kune vanogadzira eanoshanda masisitimu ayo gadzirisa Macs, iPhone / iPad uye iPod touch, Apple TV uye Apple Watch.
Kuvhurwa kweiyo betas kunobvumira vanogadzira kuti vagadzirise maitiro avo kune iyo nyowani vhezheni yeiyo inoshanda sisitimu, asi kuti vakwanise kuzviita nemazvo Ivo vanoda chishandiso chakaringana uye chakakwidziridzwa nezvazvino zvitsva zvakaunzwa.
Tiri kutaura nezve Xcode, iko kunoshandiswa nevanogadzira kugadzira mafomu eMac, iPhone / iPad uye iPod bata Apple TV uye Apple Watch. Maawa mashoma mushure mekutanga kweyekutanga betas, Apple yakaburitsa beta yekutanga yeXcode 9, vhezheni itsva yeiyi software gadzira maapplication eApple ecosystem. Kuve software yakanangwa chete kune vanogadzira, vashandisi vasiri chikamu chenharaunda ino havagone kuwana iyi beta kudzamara yasvika pamusika mune yayo yekupedzisira vhezheni.
Xcode 9 inopa vanogadzira ese maturusi anodikanwa kuitira kuti vatange kuchinjisa kunyorera kwavo kune dzese nhau nekuvandudza kwakaunzwa neApple mushanduro nyowani dzayo mashandiro. Kana iwe uchida kutanga kukudziridza yeApple ecosystem, nekuti ikozvino unogona kurodha vhezheni 8 yeXcode, inowanikwa mahara kuburikidza neMac App Store, chishandiso chinongowanikwa muChirungu uye chinongogara pasi pe5 GB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Apple Inoburitsa Yekutanga Beta yeXcode 9
Enda zvisina maturo echinyorwa chine redundant uye filler verbiage kuti utaure zviri nyore uye zvakapusa kuti beta nyowani yeXCode yabuda. Iwe hausisiri kana kuziva zvekunyora, iwe unongonyora chete kuti uve nezvimwe zvakashata zvemukati zvemukati pane imwezve blog. Indaneti inowedzera izere nemarara
Apple inogadziridza GarageBand yeMac ine Kubata Bar kutsigira uye nedzimwe nhau
Shanduko yeApple mudzimba, Apple TV uye HomePod